Vaovao - Scaffolding Standard material, Q355, ny fomba fisafidianana ny akora mahazatra scaffolding.
Scaffolding Standard material, nahoana isika no misafidy ny Q355.
Mpanjifa maro no manontany ahy momba ny fitaovan'ny Malagasy, ary namana maro izay mividy ny scaffold amin'ny ringlock tsy fantatrao ny antony ampiasantsika ny Q355 (Q345) amin'ny safidin'ny fitaovan'ny fenitra, ary koa misy fenitra marobe miaraka amin'ny stamp vy Q355 voasokitra eny an-tsena, fa afangaro amin'ny fitaovana Q235. Ho an'ireo trangan-javatra etsy ambony, isikaRapid Scaffolding (Engineering) Co., Ltd.., amin'ny maha talen'ny famoahana ny "spesifika ara-teknika momba ny fiarovana scaffold sinoa", dia hanome anao famakafakana amin'ny fomba fijery, mba hanazavana ny olan'ny "fenitra ara-pitaovana Q235"!
Voalohany indrindra, avelao aho hanazava ny dikan'ny Q355 sy Q235.
Q345 (Q355) dia karazana vy, vy kely vita amin'ny firaka kely ampiasaina amin'ny tetezana, fiara, sambo, tranobe, sambo fanerena, fitaovana manokana, sns. "Q" dia midika hoe tanjaka ny vokatra, ary 345 dia midika fa ny tanjaky ny vy io vy io dia 345MPa.
Q235 vy tsotra rafitra karbonina dia antsoina koa hoe vy A3. Ny takelaka vy-tsotra vita amin'ny karbaona dia karazana fitaovana vy. Ny Q dia mamaritra ny fetran'ny vokatra an'ity karazana fitaovana ity, ary ny 235 any aoriana dia manondro ny sandan'ny vokatra amin'ity karazana ity fitaovana, izay manodidina ny 235MPa.
Raha toa ka Q235 ny fitaovana mahazatra an'ny scaffolding hidin-kazo, dia 87% fotsiny ny Q355. Ny fahaizan'ny fenitra dia 90% amin'ny fahafaha-mitondra azo avela, izany hoe 47.4kN. Raha ovaina ho Q235 ny fitaovan'ny fenitra, ny lanjan'ny famolavolana / azo avela amin'ny fenitra dia = 47,4 / 46,1 = 103%, izay mihoatra ny fahafaha-mizaka azo avela ary mety hiteraka loza mitatao.
Araka ny fantatsika rehetra, ny injenieran'ny scaffolding dia an'ny iray amin'ireo loharano lehibe mampidi-doza amin'ny injenieran'ny fananganana, ary ny fenitra no tsorakazo lehibe indrindra ao amin'ny rafitry ny fikandrana hidin-trano, ka amin'ny safidintsika ara-pitaovana dia mila manamarina mafy isika!
Fotoana fandefasana: Apr-27-2021